Maxa Sababay in Mogadishu noqtay magaalo aan amni aheyn | Dayniile.com
Home Warkii Maxa Sababay in Mogadishu noqtay magaalo aan amni aheyn
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa u muuqda xiligan mid faraha kasii baxaya, waxaana qeybo badan oo kamid ah caasimada kusoo kordhaya dilal qorsheesan oo shaqsiyaad gaar ah loo geesanayo iyo qaraxyo.
Bishan November magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo tiro badan iyo dilal loo geestay dad shacab ah iyo sidoo kale dad u shaqeeya dowlada oo isugu jira askar iyo shaqaale caadi ah.
Dadkii geestay dilalka ayaa inta badan baxsaday marka laga reebo hal nin oo dil ka geestay degmada Dharkeenley oo isna ciidamada amaanka dileen, waxaana hada laga cabsi qabaa in ay sii kordhaan dilalka iyo qaraxyada magaalada ka dhacaya.
Ciidamada amaanka gaar ahaan booliiska iyo Nabad sugida ayaan wali qaadin talaabooyin looga hortagayo qaraxyada iyo dilalka kusoo badanaya Muqdisho, waxaana xalay qaraxii ugu dambeeyay lagu dilay Wariye caan ahaa oo lagu magacaabayay Cabdicasiis Afrika.
Shacabka magaalada Muqdisho ayaana kusii kordhay cabsida iyo walaaca ay ka qabaan qaraxyada iyo dilalka kusoo batay magaalada Muqdisho, waxa ayna inta badan shacabku iska warsanayaan xaalka magaalada xiligan kala guurka ah.
Previous articleMadaxweyne Biixi “Xisbiga Waddani isaga ayaa maxkamad isa saaray”
Next articleAbiy Ahmed: Midnimo ayaan uga gudbi karnaa Khatarta ka jirta Itoobiya.
Kenya oo lacag badan dul dhigtay shakhsiyaad falal argagixisanimo loo heysto
Waaxda Dembi Baarista Kenya ayaa ballan qaadday inay adduun dhan Sh10 milyan abaalmarin ahaan u siineyso qof walba oo warbixin ka keena shakhsiyaad loo...
Dawlada Shiinaha oo diyaaradihii dagaal ee ugu badnaa u dirtay hawada...
Wariye lagu xiray degmada Guriceel ee G/ Galgaduud
Maamulka Puntland oo degaanadeeda ka musaafurisay Qaxooti Itoobiyaan ah